पतिलाई झुठ बोलेर अस्पताल जान्छु भनेकि श्रीमति भतिजसँग जङ्गल गएपछि… – PathivaraOnline
Home > अपराध > पतिलाई झुठ बोलेर अस्पताल जान्छु भनेकि श्रीमति भतिजसँग जङ्गल गएपछि…
ललितपुर – ललितपुरको अल्का अस्पतालमा हाउस किपिङमा कार्यरत कर्मचारीको ह त्या आरोपी भतिजा निर्मल केसीले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा आत्म समर्पण गरेको खुलेको छ । घाटी थिचेर हत्या गरेको मनाजले प्रहरीले शव फेला पारेको खबर पाउनेत्तिकै आत्मसमर्पण गरेको खुलेको छ । परिसरका प्रहरी अधकृतले भने करिब साढे १२ बजेतिर उनी परिसर आएका थिए । समाचार विभिन्न अनलाइनहरूमा छापिएकाे छ ।
परिसरको मुद्धा शाखाको टोलीले तत्कालै महानगरीय प्रहरी वृत चापागाँ उमा पठाएका थिए । प्रहरीले भने घटनाको अनुसन्धान भैरहेको उनले हो वा अन्यल भन्ने विषयमा भन्न नसकिने बताएको छ ।प्रहरी वृत चापागाउका प्रमुख डिएसपी कृष्णराज ओझाले घटनाको विषयमा छानविन भैरहेको बताउनुभयो । उस्ले हो वा अन्यले भन्ने विषयमा अहिलेनै बोल्ने अवस्था नभएको उहाको भनाई थियो ।
लामो समयदेखि अल्का अस्पतालमा कार्यरत उनी केहीदिन बिदा पछि १७ गते काममा फर्किएकी थिइन । सोही दिन हराएपछि परिवारले परिसरमा उजुरी दिएका थिए ।हराएको चार दिनपछि शव गोदावरी नगरपालिका १० स्थित मुलडोलस्थित लेलेको जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ चुनि खेल बस्दै आएकी उनीलाई घुम्न जाने बहानामा जंगलमा लगेर घाटि थिचेर हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
उनी हराएको भन्दै तीनदिनअघि परि सरमा उजुरी परेको थियो ।उनको शव पोष्ट मार्टमको लागि पाटन अस्पताल लगिएको छ । उनका शव शुक्रबार साँझ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० मुलडोलस्थित सामुदायिक वनमा फेला परेको थियो । प्रहरीले कुकुरको सहयोगमा शव पहिचान गरेको थियो ।
शुरू हुदै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ
ललितपुर – ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज दिउँसो तीन बजे तानिने भएको छ । यस वर्ष मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा गरेर विगतका वर्षझैँ गाःबहाल हुँदै मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल र अन्त्यमा जावलाखेल पुर्याउन सम्भव नदेखिएसँगै रथलाई आज ललितपुर महानगरपालिका अगाडिको सोह्रखुट्टे पाटीसम्म तानेर राख्न लागिएको हो ।
आज बिहानैदेखि १९ आँै जातीय खलः पुचःका ५०१ स्वयं सेवक खटाएर रथको मर्मत सम्भार गराउनका साथै रथ तान्ने व्यवस्थापनसमेत गराइरहेको पुचःका संयोजक चन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा दिनानुदिन फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण यसपटक लोकनाथलाई टोलटोलमा लगेर रथयात्रा तथा जावलाखेल पुर्याएर भोटोजात्रा गर्न सम्भव नहुँदा तीन–तीन फिट वा छ फिटको दूरीमा हरेक मानिसलाई राखेर हातैले रथ तान्ने भएका छाँै । हाल रथ भएको स्थानबाट मात्र १५ देखि २० मिटर पर सोह्रखुट्टे पाटी भएकाले धेरै परसम्म रथ तान्नुपर्ने छैन् ।” गाःबहालबाट महानगरपालिकाको ढोकासम्म करिब ५०० मिटर मीननाथको रथ पनि तानिने महर्जनले जानकारी गराउनुभयो ।
बाँसको झाडीमा चमत्कारिक बस्तु भेटियो
हामी मुखले धेरै अगाडि छौँ, कामले धेरै पछाडि (भिडियो सहित)
१८ वर्षीय प्रवीणकाे रहस्यमय घ’टना, खो’लामा यस्तो द’र्दनाक अवस्थामा भटिए!
के सुन्नु परेकाे यस्तो! यी ठुलीआमा जस्ले गरिन् बालिका बलात्कारपछि हत्या प्रयास!